Uhlu lwakho Lokuhlola U-Blogger | Martech Zone
Izinkampani ze-SEO ziyaqhubeka nokuzama ukukhohlisa imiphumela yenjini yokusesha… ngeke ize ime. UMat Cutts weGoogle ubhale okuthunyelwe okuhle, Ukuwohloka nokuwa kokubloga kwezivakashi ze-SEO kufaka phakathi ividiyo esitendeni sakhe kubhulogi lezivakashi futhi uMatt unikeza lokhu njengomugqa wakhe oyinhloko:
Ngifuna nje ukugqamisa ukuthi inqwaba yamasayithi asezingeni eliphansi noma ogaxekile abambeke ku- “guest blogging” njengecebo labo lokwakha izixhumanisi, futhi sibona eminye imizamo eminingi yokwenza ogaxekile yokwenza ukubhuloga kwezivakashi. Ngenxa yalokho, ngincoma ukungabaza (noma okungenani ukuqaphela) lapho othile elula isandla futhi ekunikeza nge-athikili yebhulogi yezivakashi.
Sisanda ukuphuma i-blogger yezivakashi lapha Martech Zone. Umbhali uze kithi esho ukuthi ufuna ukuthola ukuvezwa okwengeziwe embonini yezentengiso futhi unethemba lokuthi uzosibhalela izindatshana ezijulile. Simnikeze ukufinyelela futhi wabhala okuthunyelwe kokuqala.
Nganginokungabaza. Okuthunyelwe kwakunezixhumanisi ezimbalwa ngaphakathi kokuqukethwe… ezimbalwa zazenziwe ngendlela ejwayelekile kepha eyodwa yayicacile futhi ngangikhathazekile. Besivele sisebenzisa izixhumanisi ezingafakwanga kokuqukethwe okuphumayo, kepha angikaze nginyakazise iqiniso lokuthi bekungekhona okuqukethwe okubhekiswe kakhulu… ngezixhumanisi eziqondiswe kakhulu. Ezinye izindatshana ezimbili ezivela kumlobi nami bekufanele ngiqale ngenze uphenyo oluthile.
Ngibuyekeze iphrofayili yakhe ye-Twitter, iphrofayli ye-Facebook, iphrofayili ye-Google + nezinye izindatshana kuwebhu yonkana. Ngamunye wabo wayenobuncane… azikho izingxoxo zomuntu siqu, abekho abangane, futhi imibuzo ethile ukuthi wayevelaphi noma wayehlala kuphi manje. Ubonakala engumlingiswa oqanjiwe yize ayeqoqe ama-athikili online. Vele anginasiqiniseko sokuthi uyisabizwana esifanele yini.
Umhlanga wokugcina ngukuthi ngacela ikhophi yelayisense yakhe yokushayela. Ubhale futhi wathi akakhululekile ukuhlinzeka ngemininingwane eyimfihlo engako. Angikaze ngicele imininingwane eyimfihlo… ubengafihla ikheli lakhe lasekhaya kanye neminye imininingwane yomuntu. Bengimane ngifuna ubufakazi bokukhonjwa. Ngalokho, ngasusa zonke izixhumanisi kokuthunyelwe kwakhe futhi ngashintsha iziqinisekiso zakhe zokungena ngemvume.
Ngakho-ke… ukusuka lapha kuye phambili, nalu uhlu lwami lokuhlola:
Ukuhlonza okuhlelekile - le bhulogi iyigunya lami online futhi ngidinga ukugcina ukuvezwa, inhlonipho kanye nekhwalithi ukuze ngigcine futhi ngikhule okulandelayo. Angizukubeka engcupheni kwi-backlinker ethile.
Imigomo Yokusebenzisa - siqinisekisa ukuthi ababhali bethu bonke bayazi ukuthi iyini inhloso yebhulogi yethu - ukuhlinzeka abathengisi ukuqonda ukuthi amathuluzi nobuchwepheshe kungayithinta kanjani imizamo yabo yokumaketha. Akukhona ukuthengisa noma i-backlink! Noma yikuphi okunye okuqukethwe kuzosuswa futhi umbhali uzodilizwa.
Izindima Zabanikeli - bonke ababhali bethu bazoqala ngokuba ngabanikeli… okusho ukuthi bangabhala okuqukethwe kepha abakwazi ukukushicilela bebodwa. Sizobuyekeza futhi sishicilele izindatshana zabo size sikhululeke ukuthi baqonde ukuthi benzani.
Ukudalula okugcwele - uma kukhona ubudlelwano obukhokhelwayo phakathi kwethu, umbhali wokuqukethwe, nezinsizakusebenza ezinikezwe kokuthunyelwe - lobo budlelwano buzodalulwa kumfundi. Asikukhathaleli ukuhlinzeka ngokuqukethwe mayelana nabaxhasi bethu noma imikhiqizo nezinsizakalo esixhumana nabo… kepha izilaleli zethu kumele zazi ukuthi kukhona ubudlelwano lapho.
Qala ukulandela - Zonke izixhumanisi azizolandelwa kokuthunyelwe kwezivakashi. Akukho okuhlukile. Inhloso yakho kufanele kube ukufinyelela nokuthola ukuvezwa ngezithameli zethu ezibanzi nokulandela - hhayi ukuxhuma emuva kwe-SEO. Masigcine izinto eziza kuqala kithi ziqondile.
Izithombe eziqinisekisiwe - noma yikuphi okuqukethwe okubukwayo kuzoba nelayisense. Uma i-blogger yethu yezivakashi ingenayo insiza, sizosebenzisa eyethu insiza yesitoko nevidiyo. Ngeke ngithole umthethosivivinywa wokuqola kusuka kwinsizakalo yezithombe zesitoko ngoba i-blogger yezivakashi yathatha isithombe kusesho lwe-Google.
Okuqukethwe okuhlukile - asihlanganisi okuqukethwe kweminye imithombo. Konke esikubhalayo kwehlukile. Noma sabelana nge-infographics, ihambisana nendatshana eyehlukile kuzithameli zethu.
Yiziphi ezinye izinyathelo ozithathayo ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lwakho lokubloga lwezivakashi kubhulogi yakho luyasiza futhi alulimazi isithunzi sakho negunya lakho ku-inthanethi ngokusesha nangokomphakathi?
Tags: isu le-backlinkama-backlinksfakeBlogger yezivakashiseo
Mar 26, 2014 ku-3: 10 AM
Umsebenzi omuhle uDouglas, okuthunyelwe okuhle futhi okungokwemvelo ngokwenziwa yilaba babhulogi ngokubhuloga kwezivakashi. Angazi ukuthi kungani ungagxili kule mihlahlandlela ngaphambi kokunikela ukubhala okuthunyelwe kwezivakashi kubhulogi yakho. Sonke siyazi ukuthi le mihlahlandlela iyimpoqo futhi sonke kudingeka siyilandele ngaphambi kokuvumela noma ngubani ukuthi abhale ibhulogi yezivakashi kubhulogi yakho.